Dhageyso:-Sawirro: Masuuliyiinta Maamulada Gobolada ¡yo Degmooyinka Baay,Shabeelaha hoose ¡yo Bakool 00 UU maanta Tababar ku saabsan maamul. wanaaga uga furmay Magaalada Baydhabo. | warsanradio baydhabo
Home WARARKII MAANTA	Dhageyso:-Sawirro: Masuuliyiinta Maamulada Gobolada ¡yo Degmooyinka Baay,Shabeelaha hoose ¡yo Bakool 00 UU maanta Tababar ku saabsan maamul. wanaaga uga furmay Magaalada Baydhabo.
Dhageyso:-Sawirro: Masuuliyiinta Maamulada Gobolada ¡yo Degmooyinka Baay,Shabeelaha hoose ¡yo Bakool 00 UU maanta Tababar ku saabsan maamul. wanaaga uga furmay Magaalada Baydhabo.
written by warsan radio 22/10/2015
Munaasabad lagu furayey Tababar ku aadan maamulwanaaga iyo kor u qaadida xiriirka bulshada iyo
¡sdhexgalka masuuliyiinta degmooyinka ¡yo gobolada Koonfurgalbeed oo ka furmay maanta
magaalada Baydhabo ayaa waxaa kasoo qayb galay dhamaan masuuliyiinta gobolada ¡yo
degmooyinka Koonfur-galbeed, wasiiro ¡yo odayaal dhaqameedyo.
Siminaarka 00 SOCOfl doona mudo saddex maalmood ah ayaa waxaa munaasabada ka hadlay ugu
horeyn gudoomiyaha Degmada Baydhabo mudane Cabdullaahi Cali watlin iyo gudoomlyaha gobolka
Bay mudane Cabdirashiid Cabdulahi 00 iyaga marti loo ahaa iyagoo halkaasi kasoojeediyey sida ay
ugu faraxsanyihiin ¡n ay isbartaan masuuliyiin badan 00 aanay aqoon isku laheyn.
Sidookale waxaa kulanka Ka hadlay Gudoomiyaha Gobolka Shabeelaha hoose mudane Cabduqadir
Sheekh Maxamed Nuur (Sidil) 00 sheegay in ay farxad u tahay in masuuliyiinta degmooyinka Sh/hose
ay soo gaaraan Magaalada Baydhabo ayna is arkaan masuuliyiinta gobolada kale ee Koonfur galbeed.
Waxaa sidoo kale munaasabada ka hadlay odayaal ka socday golaha malaaqyada 00 uu kamid yahay
Suldaan Cabdulaahi Caliyow Ibrow.
Ugu danbeyn waxaa kulanka ka hadlay kusimaha wasiirka Arimaha gudaha KG ahna wasirka
dhaqancelinta iyo tababarada maleeshiyaadka Xasan Xuseen Eelay.
Si kastaba ha ahaatee tababarkan ayaa waxaa soo qabanqaabiyey Wasaarada arimaha gudaha KG
waxaana tababarka bixinaya hay’ada TiiZ ayadoona ay fududeyneysa hay’adda CPD ayadoo inta
tababarka uu socdo la isku weydaarsan doono aqoon ku aadan maamulka iyo maamul wanaaga.
Dhageyso:-Sawirro: Masuuliyiinta Maamulada Gobolada ¡yo Degmooyinka Baay,Shabeelaha hoose ¡yo Bakool 00 UU maanta Tababar ku saabsan maamul. wanaaga uga furmay Magaalada Baydhabo. was last modified: October 22nd, 2015 by warsan radio
Dhageyso:-wareysi aanu la yeelanay godoomiye ku xigeenka arimaha bulshada faysal cabdulqaadir Digi asigoo shir jaracid>>
Dhageyso:-Wareysi Malaaq Maxamed Xaji Maxamed
Dhageyso:-wareysi Xasaasi Ah oo aanu layeelanay marka xasan cumar macalin..
War Deg Deg Ah:- Tafatiraha iyo Soo Saaraha Wararka Ee Warbaahinta IdaleNews Xasan Ismaaciil Isaaq oo Ku xiray Ciidamada Booliska Ee Degmada Baydhabo,,,
Dhageyso:-Wareysi Ku Saabsan Xaladaha Xuduud Kenya iyo Soomaaliya Leeysaamow